တရားဝင်အသိပေးချက် - Ikkaro
ikaro စပိန်နိုင်ငံ၊ ဗလင်စီယာ၊ Sagunto တွင် ၄၆၇၉၉၅၉ ဘ၊ NIF၊ ၄၅၇၉၉၅၉ ဘ၊ NIF ၏မာရီယာအိန်ဂျယ်လွန်းဖရန်ကိုအာစီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်က ikkaroweb (မှာ) gmail က (ပွိုင့်) com
ဖုန်း (+၃၄) ၆၄၅ ၁၃၄ ၅၃၉
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်၏ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်: ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ် ikkaroweb (at) gmail (dot) com နှင့်အတူMaríaÁngeles Franco Arce
သင်၏အခွင့်အရေးကိုမည်သို့ကျင့်သုံးရမည်နည်း အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးရန်တောင်းဆိုမှုအတွက်သင်၏ ID ၏မိတ္တူကူးခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအလားတူမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများအပါအ ၀ င်MaríaÁngeles Franco Arce ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သို့မဟုတ်ဤတရားဝင်အသိပေးစာခေါင်းစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာသို့စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အောက်ပါ:
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲခွင့်ဖြေ - ဒီကုမ္ပဏီကမင်းရဲ့ဒေတာတွေကိုကိုင်တွယ်နေလားဆိုတာမေးကြည့်ပါ။ María elngeles Franco Arce
သင်၏ကုသမှုကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်တောင်းခံပိုင်ခွင့်မည်သည့်အမှုကိစ္စတွင်တောင်းဆိုမှုများကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်María elngeles Franco Arce မှသာထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။
ကုသမှုကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ဖြေ - María reasonsngeles Franco Arce ဟာခိုင်လုံတဲ့တရားဝင်အကြောင်းပြချက်တွေ (သို့) ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ရင်သူတို့ကိုဆက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်၊
ဒေတာသယ်ဆောင်နိုင်ခွင့်ဖြေ - အကယ်လို့မင်းရဲ့ဒေတာကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကလုပ်ဆောင်စေချင်တယ်ဆိုရင်၊ María elngeles Franco Arce ကသင်၏အချက်အလက်များကိုတာ ၀ န်ယူထားသူအသစ်သို့သယ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။
ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်ထံမည်သို့တိုင်ကြားရမည်နည်း။ MaríaÁngeles Franco Arce သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ပုံနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြaနာတစ်ခုရှိသည်ဟုသင်ယူဆပါကသင်၏တောင်းဆိုမှုများကိုMaríaÁngeles Franco Arce ၏လုံခြုံရေးမန်နေဂျာသို့ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သို့ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခွင့်အာဏာ သောဖြစ်ခြင်း, ကိုက်ညီ ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်စပိန်အေဂျင်စီ, စပိန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ညွှန်ပြတ။
လူမှုကွန်ယက်များရှိစာမျက်နှာများနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုMaría elngeles Franco Arce မှတင်ထားသောအသုံးပြုသူအချက်အလက် အသုံးပြုသူသည်သူတို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းသည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့ကိုသူတို့ရုပ်သိမ်းသည်အထိပြုလုပ်သည်။
María elngeles Franco Arce သည်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူခဲ့သည် သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလေးစားပါ တော် ၀ င်အမိန့် ၁၇၂၀ ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ၎င်းတို့အား၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုရန်အပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကုသခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၎င်းတို့အားထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်ဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်ဥပဒေ ၁၅/၁၉၉၉ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စည်းမျဉ်းများကိုအတည်ပြုပေးသောဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် ၂၀၀၇ ။
ထို့အပြင်၊ သင်၏ဒေတာများကိုအချိန်နှင့်အမျှမွမ်းမံထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ အချက်အလက်များ၏မတိကျမှုသို့မဟုတ်မှားယွင်းမှုအတွက်၊ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အဖြစ်MaríaÁngeles Franco Arce သို့ဖြစ်စေ၊ ဟု၏အသုံးပြုမှုကိုရန်။
María elngeles Franco Arce သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ brute force attack များနှင့်ကုဒ်ထိုးခြင်းများ၏တည်ရှိမှုကိုသိရှိနိုင်ရန်လုံလောက်သောလုံလောက်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုချမှတ်ခဲ့သည်။
သို့သော်၊ သင်သတိပြုရမည်မှာအင်တာနက်ပေါ်ရှိကွန်ပျူတာစနစ်များ၏လုံခြုံရေးအစီအမံများသည်လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိသောကြောင့်María elngeles Franco Arce သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ (သို့) ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စေနိုင်သောအခြားဒြပ်စင်များ (software နှင့် hardware) မရှိခြင်းကိုအာမမခံနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အသုံးပြုသူများ၏သို့မဟုတ်၎င်းတွင်ပါရှိသော၎င်းတို့၏အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များပါ ၀ င်သည်။
အကယ်၍ ကွာဟချက်တစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိပါကMaría elngeles Franco Arce ကဆုံးဖြတ်သည် အများဆုံး ၇၂ နာရီအတွင်းအသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြားပါ.
ဝက်ဘ်နှင့် hosting: ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် Banahosting မှငှားရမ်းထားသည့်María elngeles Franco Arce မှဆာဗာများပေါ်တွင်စံအဆက်အသွယ်ပုံစံများမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာပေးပို့ခြင်းကိုခွင့်ပြုသော SSL TLS v.1.2 စာဝှက်စနစ်ရှိသည်။
ဝယ်ယူပုံစံကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးများမှပေးသောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူရန်အသုံးပြုသူသည်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များလိုအပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီတွင်သတ်မှတ်ထားသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခြေအနေများနှင့်အညီဝယ်သူပုံစံရှိသည်။ ဒေတာများကို Banahosting ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
သတင်းလွှာကြေးပေးသွင်းခြင်းပုံစံများ- MaríaÁngeles Franco Arce သည်သင်၏အီးမေးလ်အချက်အလက်၊ အမည်နှင့်လက်ခံမှုကိုလက်ခံခြင်းကိုသိမ်းဆည်းသည့် Sendgrid, Feedburner သို့မဟုတ် Mailchimp သတင်းလွှာဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ သင်လက်ခံရရှိသောတင်ပို့မှုတစ်ခုစီ၏အောက်ခြေတွင်ဖော်ပြထားသောသီးခြားလင့်ခ်တစ်ခုမှတဆင့်အချိန်မရွေးသတင်းလွှာကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်
လက်ငင်းစာတိုပေးပို့: María elngeles Franco Arce သည် WhatsApp၊ Facebook Messenger သို့မဟုတ် Line ကဲ့သို့သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမပံ့ပိုးပါ။
ငွေပေးချေမှုကိုပံ့ပိုးပေးသူများ: ဝက်ဘ်မှတဆင့်သင်သည်လင့်ခ်များမှတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည် PayPal က o အစင်း, MaríaÁngeles Franco Arce ပေးသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေရန်။ María elngeles Franco Arce ၏ ၀ န်ထမ်းများသည်သင့်အားတတိယပါတီများသို့သင်ပေးအပ်သောဘဏ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို (ဥပမာ - ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်) ကိုအချိန်မရွေးရနိုင်သည်။
ကွန်ရက်များရှိခြင်း: María elngeles Franco Arce သည်အင်တာနက်ရှိအဓိကလူမှုကွန်ယက်အချို့တွင်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရှိသည်။
ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တရားဝင်မှု အထက်ဖော်ပြပါကွန်ယက်တစ်ခုချင်းစီတွင်ဒေတာများနှင့်အတူမာရီယာအန်ဂျယ်လက်စ်ဖရန်ကိုအာစီကိုလုပ်ဆောင်မည့်ကုသမှုသည်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်သည်ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုသည့်အဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဥပဒေကိုတားမြစ်မထားသည့်အချိန်တွင်မာရီယာအန်ဂျယ်လွန်းဖရန်ကိုအာစီကလူမှုကွန်ယက်သည်သူမ၏လှုပ်ရှားမှုများ၊ တင်ဆက်မှုများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကိုခွင့်ပြုကြောင်းမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအသိပေးနိုင်လိမ့်မည်။
ဒေတာထုတ်ယူမှု အသုံးပြုသူ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုအတိအလင်းဖော်ပြခြင်းမရှိပါကMaría elngeles Franco Arce သည်လူမှုကွန်ယက်များမှအချက်အလက်များကိုဘယ်တော့မျှထုတ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အခွင့်အရေး: လူမှုကွန်ယက်များ၏သဘောသဘာဝအရနောက်လိုက်၏အချက်အလက်ကာကွယ်မှုအခွင့်အရေးကိုထိရောက်စွာလေ့ကျင့်ခြင်းက၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဘာသာရပ်ဖြစ်သည့်အခါMaría elngeles Franco Arce သည်အတိုင်းအတာအထိသင့်အားဤအဆုံးသတ်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏အခွင့်အလမ်း
အီးမေးလ်ပို့ရန်။ MaríaÁngeles Franco Arcese ၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုသည် Sendgrid ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။
လူမှုကွန်ယက်များ MaríaÁngeles Franco Arce သည်အမေရိကန်လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သော YouTube၊ Facebook၊ Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard ကိုအသုံးပြုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအချက်အလက်လွှဲပြောင်းမှုပြုလုပ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝရှိပြီးမာရီယာရှိဆာဗာများပေါ်တွင်ရှိသည်။ throughngeles Franco Arce သည်ဒေတာများကို ၄ င်းတို့မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူများ၊ စာရင်းပေးသွင်းသူများသို့မဟုတ်ရေကြောင်းကုမ္ပဏီများသည်MaríaÁngeles Franco Arce သို့ပေးပို့သော (သို့) မျှဝေသောအချက်အလက်များကိုဆက်ဆံသည်။
ငွေပေးချေသူများ။ သငျသညျမှတဆင့်ပေးဆောင်နိုင်အောင် PayPal က o အစင်း, MaríaÁngeles Franco Arce သည်သက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတောင်းခံမှုထုတ်ပေးရန်အတွက်ထိုအချက်အလက်များ၏တင်းကြပ်စွာလိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုဤငွေပေးချေသူများအတွက်ပေးပို့လိမ့်မည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အဖြစ်သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်မှ စ၍ María elngeles Franco Arce သည်သုံးစွဲသူအမည်နှင့်အီးမေးလ်၊ IP လိပ်စာ၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ ID / CIF နှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ María elngeles Franco Arce သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိပဲပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တင်ဆက်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဤတရားဝင်အသိပေးချက်အဖြစ်အသိပေးသည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူ၏အခြေအနေကိုမည်သူပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းအခိုင်အမာ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အကြောင်းအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤတရားဝင်အသိပေးချက်ကို ယခုအချိန်မှစ၍ ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမရှိဘဲလက်ခံခြင်း၊
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုရာတွင်အသုံးပြုသူသည်María elngeles Franco Arce သို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပုံရိပ်၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်အခွင့်အရေးများကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်မည်သည့်အပြုအမူကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်သဘောတူသည်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုပေါ်တယ်ကိုပျက်စီးစေခြင်း၊ ဝဘ်၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှု။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှအသုံးပြုသောလူမှုရေးကွန်ယက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကွတ်ကီးများလည်းသူတို့ကိုယ်ပိုင် cookie ပေါ်လစီများရှိသည်။
စပွန်ဆာကြော်ငြာများ, Affiliate လင့်များနှင့်ကြော်ငြာ
ကျနော်တို့ကမကထအကြောင်းအရာ, ကြော်ငြာများနှင့် / သို့မဟုတ်တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုဆက်ကပ်။ ဤတွဲဖက်လင့်ခ်များသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ထားသောကြော်ငြာများတွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကြော်ငြာရှင်များမှပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောတိကျမှုသို့မဟုတ်အမှားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာ ၀ န်မရှိပါမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုကြော်ငြာရှင်များ၏အတွေ့အကြုံ၊ သမာဓိရှိမှုသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ယူမှုသို့မဟုတ်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှအာမခံခြင်းမရှိပါ။
အမေဇုံ Affiliates ဥပဒေရေးရာသတိပေးချက်
ငါသည်ဤဘလော့ဂ်၌သင်ရှာတှေ့နိုငျသောတွဲဖက်လင့်ခ်များအကြားအချို့သောဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါအကြောင်းကြား အမေဇုံ Affiliate အစီအစဉ်မှ (ကျွန်ုပ်စာရင်းသွင်းထားခြင်းခံရသည်) ထို့ကြောင့်အမေဇုန်ဝက်ဘ်ဆိုက် (ထုတ်ကုန်အမည်) တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်လက်ဗွေရာများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်တာဝန်မရှိပါဟုအမေဇုန် Affiliates မှဤအကြောင်းကြားစာဖြင့်သင့်အားအကြောင်းကြားရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ , ဖော်ပြချက်, စျေးနှုန်း, ရရှိနိုင်မှု, etc):
"စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်မှုသည်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲနှင့်အချိန်အရတိကျသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်၌ Amazon ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုသတင်းအချက်အလက်မဆိုဤကုန်ပစ္စည်း ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည်။ "
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ကို Amazon Services LLC မှရရှိသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် 'as as' ဖြစ်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းတို့တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်MaríaÁngeles Franco Arce ၏အမြင်ကိုသေချာပေါက်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။
၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သောဆောင်းပါးများ၏ပါ ၀ င်မှုသည်တရား ၀ င်အကြံဥာဏ်များအတွက်အစားထိုးခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ မရပါ။
အသုံးပြုသူသည်သက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်ကို ဦး စွာမချဉ်းကပ်ဘဲဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အရေးယူခြင်းမပြုရ။
ဤအထွေထွေအခြေအနေများအားဖြင့်မည်သည့်တီထွင်မှုသို့မဟုတ်စက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုမဆိုပေါ်တယ် (သို့) ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းများမှမည်သည့်အရာကိုမဆိုအပ်နှင်းခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အများပြည်သူဆက်သွယ်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုကိုင်ဆောင်ထားသူကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုထားခြင်းမှအပမှ လွဲ၍ မည်သည့်သဘောသဘာဝကိုမဆိုနည်းလမ်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့်ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း။
အသုံးပြုသူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံး၊ အပြည့်အစုံအက္ခရာမပါဘဲစာသား၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်းနှင့်တင်ဆက်ခြင်းအပါအ ၀ င်၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စပိန်နိုင်ငံပါ ၀ င်သောနိုင်ငံတကာစာချုပ်များနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်ထားသောအခြားတရားဝင်အခွင့်အရေးများနှင့်စပိန်၏အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့်ဥပဒေများ။
အသုံးပြုသူ (သို့) တတိယပုဂ္ဂိုလ်က ၄ င်းတို့၏တရား ၀ င်အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုဆိုက်တွင်အချို့သောအကြောင်းအရာများတင်ခြင်းကြောင့်ချိုးဖောက်သည်ဟုယူဆလျှင်၊ သူတို့သည်ဤအခြေအနေကိုMaríaÁngeles Franco Arce သို့အကြောင်းကြားရမည်။
ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့် site ပေါ်တွင်သူတို့တည်ရှိရာတို့ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည့်အကြောင်းအရာများ၊ ညွှန်ပြထားသောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အကြောင်းကြားစာတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိစေရန်သက်ဆိုင်သူကတာ ၀ န်ယူမှုရှိကြောင်းဖော်ပြပါ။
အသုံးပြုသူများသည်ဤစာသားမှဖြစ်စေ၊ MaríaÁngeles Franco Arce ၏မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမှဖြစ်စေပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားမှုများသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုများအားဖြေရှင်းရန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောစားသုံးသူအနုညာတစီရင်ခြင်းစနစ်သို့တင်သွင်းနိုင်သည်။ အသင်း ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသူမှသင့်လျော်သော bar အသင်း၏သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ရမည်။
စပိန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရစားသုံးသူများသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအဆင့်အတန်းရှိသူများနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတွင်နေထိုင်သူများသည် အကယ်၍ မာရီယာအိန်ဂျယ်လ်ဖရန်ကိုအာစီသို့အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာတစ်ခုရှိခဲ့လျှင်တရားရုံးပြင်ပသဘောတူညီချက်ကိုရယူရန်ကြိုးစားနိုင်သည် သွားပါ အွန်လိုင်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုပလက်ဖောင်း, ဥရောပသမဂ္ဂအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့်အောက်မှာဥရောပကော်မရှင်ကတီထွင်ခဲ့သည် Regulation (EU) 524/2013.
အသုံးပြုသူ၏အခြေအနေကိုဆောင်ရွက်သူ၊ ယခုအချိန်မှစ၍ ကြိုတင်မှာကြားထားချက်မရှိဘဲလက်ခံခြင်း၊ ဤတရားဝင်အသိပေးချက်အပြင်၊ သင့်လျော်သောနေရာ၌၎င်းနှင့်အချို့သောဆက်ဆံရေးများ၌၎င်းကိုဖြည့်စွက်သည့်အထူးအခြေအနေများအားအသုံးပြုသူမည်သူမဆိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပေါ်တယ်၏ contents ။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းသည်MaríaÁngeles Franco Arce နှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု၏အစကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအသုံးပြုသူကိုအကြောင်းကြားပြီးလက်ခံသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည်လက်ရှိဥပဒေ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားတရားမဝင်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုတားဆီးရန်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တားမြစ်သည် -
လင့်ခ်များ၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများအားအဆိုပါလင့်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသိရှိခြင်းကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ María elngeles Franco Arce သည်လင့်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူမှရရှိနိုင်သောရလဒ်များအတွက်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုတာ ၀ န်မရှိပါ။
သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှမည်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာ link device ကိုမဆိုတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုသူသည်María elngeles Franco Arce ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရမည်။
ချိတ်ဆက်မှုအားတည်ဆောက်ခြင်းသည်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုမာရီယာအင်ဂျယ်လီဖရန်ကိုအာစီနှင့်ဆက်သွယ်မှုတည်ရှိရာဆိုက်ပိုင်ရှင်အကြားဆက်ဆံရေးတည်ရှိမှုကိုမဆိုလိုပါ။ ထို့အပြင်မာရီယာအိန်ဂျယ်လ်ဖရန်ကိုအာစီ၏ပါ ၀ င်မှုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လက်ခံမှုသို့မဟုတ်အတည်ပြုချက်ကိုမူမဆိုလိုပါ။
ဤကွတ်ကီးသည် visited ည့်သည်အချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သည်။ သူတို့ကြည့်ရှုသည့်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စျေးဝယ်လှည်းကိုစွန့်ပစ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့။
ထိုနည်းတူစွာ၊ မာရီယာအန်ဂျယ်လီဖရန်ကိုအာစီအားကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏သတင်းအချက်အလက်အတွက်အသုံးပြုရန်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ကြိုတင်၍ စာဖြင့်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရရှိလျှင်၊ ။
ဤဆိုဒ်သည်ဤဆိုဒ်သို့ပို့ေပးသည့်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်ေသာဒေတာဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းသည်။ ikkaroweb (at) gmail (dot) com သို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒီဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သောဒိုမိန်းများနှင့်အကြောင်းအရာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်မာရီယာအိန်ဂျယ်လွန်းဖရန်ကိုအာစီဖြစ်သည်။
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိအခြားသူများစီမံခန့်ခွဲသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဦး တည်သွားသော hyperlink များပါ ၀ င်သည်။ ဖော်ပြထားသောဝဘ်စာမျက်နှာများတွင်စုဆောင်းထားသောအကြောင်းအရာများအတွက်MaríaÁngeles Franco Arce သည်အာမခံချက်မရှိပါသို့မဟုတ်တာဝန်မရှိပါ။
ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ပါ ၀ င်မှုအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှမည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားဖြင့် မှလွဲ၍ María elngeles Franco Arce အား ကြိုတင်၍ ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရှိပါကမျိုးပွားခြင်းကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။
María websitengeles Franco Arce ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်María elngeles Franco Arce သည်တတိယပါတီ၏အပြောင်းအလဲ (သို့) ခြယ်လှယ်မှုမှရရှိသောသို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုယူလိမ့်မည်။
သင်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အော်ဂဲနစ်ဥပဒေ ၁၅/၁၉၉၉ တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသောအခွင့်အရေးနှင့်အချက်အလက်နှင့်ဆန့်ကျင်မှုကိုရယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အခွင့်အရေးများကိုစာဖြင့်ရေးသားပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောတောင်းဆိုမှုအားဖြင့်သင်၏ ID နှင့်မိတ္တူကူးယူထားသောစာရွက်စာတမ်းအားဖြင့်MaríaÁngeles Franco Arce ၏စာတိုက်လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည်ကိုသင့်အားအကြောင်းကြားပါသည်။ ikkaroweb (at) gmail (dot) com: သို့မိတ္တူကူးတစ်ခုထည့်ထားသည်။ ၁၀ ရက်မတိုင်မှီသင်အသုံးပြုရန်တောင်းဆိုထားသောအခွင့်အရေးကိုအတည်ပြုရန်သင့်တောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
MaríaÁngeles Franco Arce သည်မည်သည့်အာမခံချက်မှပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ၊ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သူသည်တာ ၀ န်မရှိပါ။
ဒီဝဘ်ဆိုက်ကိုတရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်မလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်MaríaÁngeles Franco Arce သည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုတာ ၀ န်မရှိပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောMaría elngeles Franco Arce နှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူများအကြားဆက်ဆံရေးသည်စပိန်ဥပဒေနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ရှိသည်။
အသုံးပြုသူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်း၊ María elngeles Franco Arce မှကုသမှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကုသမှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြေအနေများအားအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
လက်ရှိဥပဒေနှင့်အညီ၊ María elngeles Franco Arce သည် SPAM အလေ့အကျင့်များကိုမပြုလုပ်သောကြောင့်ယခင်ကအသုံးပြုသူမှယခင်ကတောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိသေးသောစီးပွားဖြစ်အီးမေးလ်များကိုသူမပို့ပါ။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိပုံစံတစ်ခုချင်းစီတွင်သုံးစွဲသူသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီတောင်းဆိုသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များမည်သို့ပင်ရှိပါစေကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာ / စာစောင်အားလက်ခံရန်သူတို့၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိနိုင်သည်။
«တရား ၀ င်အသိပေးစာ»အပေါ် 1 မှတ်ချက်
27:2020 pm တွင်မေလ 6, 58